သတင်းအရင်းအမြစ်ကို မီဒီယာ သတ်သလော
''ဒီမိုကရေစီဟာ အမှောင်ထုမှာ ကျဆုံးသွားပြီ''
ဇွန်လ ၆ ရက်က ဝီကီလိခ်ကို ထူထောင်သူ ဂျူလီအန် အက်ဆန်းနစ်ဂ်ျက The Intercept မှ သတင်းထောက်များကို ရည်ညွှန်း ကာ ညည်းတွားလိုက်လေ၏။
ဇွန်လ ၆ရက်၌ပင် မြန်မာမီဒီယာများကလည်း သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်နေသည့် ဆက်သွယ်ရေး ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) မှ ကင်းလွတ်ရေးအတွက် လက်ပတ်ဖြူကမ်ပိန်းပြုလုပ်ရန် Orchid Hotel တွင် အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ၆၆(ဃ) အဖြစ် ဥပဒေတစ်ရပ် ပုဒ်မတပ်ကာ လို သလို ကိုင်တွယ်နေချိန်တွင် အမေရိကန် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမူ စကတည်းက ယဉ်သကိုဆိုသလို သတင်းပေါက်ကြား မှုများအပေါ် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်မည်ဟု အတိအလင်းကြေညာပြီးမှ တက်လာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထရန့်လက်ကိုင်ထားမည့် သူလျှိုအက်ဥပဒေကလည်း အစဉ်အဆက်ကတည်းက အသင့်ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ ထရန့်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် ကတိပေးသလိုလို၊ ကြိုတင်ရာဇသံပေးသလိုလို ပြောခဲ့သောစကားများအနက် လျှို့ဝှက် သတင်းပေါက်ကြားစေသူများကို ထိထိရောက် ရောက် ကိုင်တွယ်မည်ဟု ကြုံးဝါးခြင်းကလည်းတစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ် သည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသား လုံခြုံရေး အေဂျင်စီ (NSA) မှ ကန်ထရိုက်တာ ရီရဲယ်လတီဝင်းနားသည် ထရန့်၏ရာဇသံအရ သူ၏ သက်တမ်းတွင် သူလျှို အက်ဥပဒေအရ ပထမဆုံး အမှုရင်ဆိုင်ရမည့်သူ ဖြစ်လာခဲ့လေပြီ။
ဝင်းနားသည် ဟီလာရီကလင်တန်ကို ပြုတ်ကျသွားစေသည့် ရုရှားတို့၏ ဟက်ကာတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်သော အထောက်အထားများအား The Intercept သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်ဟူသော စွဲချက်ဖြင့် အက်ဖ်ဘီအိုင်မှ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ပလူရီဘတ်စ် အင်တာ နေရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းက ကန် ထရိုက်တာ ဝင်းနားသည် ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကာ ဂျော်ဂျီယာ ပြည်နယ် ရှိ အမျိုးသား လုံခြုံရေး အေဂျင်စီတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင် မထင်မှတ်ဘဲ ဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရခဲ့သည့်အ ပေါ် နိုင်ငံတကာရပ်ဝန်းတွင် အံ့အားသင့်စရာသတင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ သည်။ ရလဒ်နှင့်အတူ အမေရိကန်မှ မဲဆန္ဒ ပြု ဆော့ဖ်ဝဲများကို ရုရှားဟက်ကာများက ဝင်ရောက်ချယ်လှယ်ရာမှ ထရန့်တစ်ယောက် သမ္မတဖြစ်လာသည်ဟု သတင်းများလည်း ဆက် လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ကို ထရန့်က ကိုယ်တိုင်အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆန် ခဲ့၏။
ယခုမူ ရုရှားဟက်ကာများသည် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် ဆန္ဒပြု ဆော့ဖ်ဝဲများကို နှောင့်ယှက်ခဲ့သည့် အထောက်အထားများ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အေဂျင်စီက ထွက်လာချိန်တွင် ဝင်းနားမှာ သတင်း ပေးတရားခံ ဖြစ်သွားရသည်။ ဒေသခံ မဲဆန္ဒရုံ အရာရှိ ၁ဝဝ ကျော်ထံသို့ လည်း မေးလ်အတုအယောင်များပို့ ခဲ့သည် ဟူသည့် အချက်အလက်များအား ၂ဝ၄၂ ခုနှစ်မေလအထိ လျှို့ဝှက်ထားရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း မီဒီယာလက်ထဲခပ်မြန်မြန် ရောက် သွားသည်ကို ထရန့်အစိုးရ သဘော မတွေ့နိုင်ဖြစ်ရသည်။
မူလက ရုရှားဟက်ကာများ၏ ကြားဖြတ်နှောင့်ယှက်မှု အထောက်အထားများ တွေ့သည်ဆိုသည့် သမ္မတအိုဘားမား၏ ပြောကြားချက် များကို ဒေါ်နယ်ထရန့်က လက်မခံခဲ့ပေ။ သို့သော် ထရန့်သည် ဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်၌ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်မူ ရွေး ကောက်ပွဲနှင့် ရုရှားဟက်ကာ ပတ်သတ်မှုများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် လက်ခံကြောင်း မှတ်ချက် ပြုခဲ့ရသည်။
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်ကလည်း မျိုးချစ်ဟက်ကာများက အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲကို ခြယ်လှယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့သလို အစိုးရအနေဖြင့်ဟက်ကာများကို အထောက် အပံ့ပေးခဲ့သည်ဆိုသည့် သတင်းများမှာလည်း လုံးဝမှားယွင်းနေသည်ဟု ထပ်မံငြင်းဆန် ခဲ့သေးသည်။
ဇွန်လ ၅ရက်၌ The Intercept တွင် ဖော်ပြချက်များအရမူ ကရင်မလင်၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ GRU က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရာရှိများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး မဲဆန္ဒရုံအချို့ကို ခြယ်လှယ်ခဲ့သည်ဟု အတိအလင်းဖော်ပြလိုက်တော့သည်။
ယခုတစ်ခေါက် ပေါက်ကြားမှုတွင် မဆန်းပြားသော်လည်း ထူးခြားသည့်အချက်မှာ သတင်းသမားတို့၏ မလျော်ကန်သောလုပ်ရပ်တစ်ခု ရှိလာခြင်းဖြစ်၏။
ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက် အထောက်အထားများပါသည့် စာအိတ်ကိုရခဲ့စဉ်က သတင်းသမားများက သတင်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီသို့ ထင်မြင်ချက်များ တောင်းခံခဲ့၏။ NSA မှ အချက်အလက်များ ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုစေခဲ့သည်။ အမည်မဖေါ်လိုသော သတင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ အေဂျင်စီ၏ ထင်မြင်ချက်ကို တောင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းထောက်များသို့ ထုတ်ပြသည့် ခေါက်ကျိုးရာများနှင့် အထောက်အထားများကို တစ်စုံတစ်ယောက်သည် စာမပို့မီ ပရင့်အရင်ထုတ်ခဲ့သည်ဟုယူဆထားသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး သူများက လူခြောက်ဦးခန့်က ပရင့်ထုတ်ခဲ့ပြီး ယင်းတို့ အနက်မှတစ်ဦးသည် သတင်းပေါက် ကြားစေခဲ့သည်။ ထိုသူမှာ ရီရဲယ်လတီဝင်းနားဖြစ်သည်ဟု ဆိုတော့၏။
ဇွန်လ ၃ရက်တွင် အက်ဖ်ဘီအိုင် အထူးအေးဂျင့် ဂျက်စတင်ဂါရစ်ခ်သည် ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အော်ဂတ်စတာမှ ဝင်းနားနေအိမ်သို့ သွားရောက်မေးမြန်းသည့်အခါ ဝင်းနားကိုယ်တိုင်က မီဒီယာသို့ သတင်းပေးခဲ့သည်ဟု ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း အက်ဖ်ဘီအိုင် ကျမ်းကျိန်လွှာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် FBJ က သူ့ကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
ရှာဖွေခွင့်အမိန့်စာအရ ဝင်းနား၏ ကွန်ပျူတာအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးသည့် အခါတွင် အမျိုး သား လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်စေနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို အီးမေးလ်များ အသုံးပြုကာ ပေးပို့ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးပါသည့်အချက်အလက်များစွာ စုဆောင်း ထားခြင်းစသော သက်သေခံအချက်အလက်များတွေ့ရသည်ဟု အက်ဖ်ဘီအိုင်အေးဂျင့်များဘက်က ဆို သည်။
နာက်ဆုံးတွင် သတင်းသမားတို့၏ ပယောဂကြောင့်ပင် ဝင်းနား အဖမ်းခံလိုက်ရသည်ဟု အခြားမီဒီ ယာများက ထောက်ပြလာခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လ ၆ ရက်က ဝီကီလိခ်တည်ထောင်သူ ဂျူလီအန်အက်ဆန်းနစ်ဂ်ျက အက်ဘီအိုင်၏ ကျမ်းကျိန် လွှာတွင်ဖော်ပြချက်များသည် အမှန်ဖြစ်ခဲ့လျှင် သတင်းသမားတို့နှင့် ပတ်သတ်သော အမည်များ ပါဝင်ရမည်ဟု Twitter တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။
''သတင်းရင်းမြစ်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းတဲ့ သတင်းထောက်တွေဟာ အန္တရာယ်ကောင် တွေပဲ'' ဟု တုံ့ပြန်ထားသည်။ တကယ်တမ်းတွင် အက်ဘီအိုင်ပြသော ကျမ်းကျိန်လွှာ ဆိုသည်ကလည်း The Intercept မှ ဖော်ပြချက်များအပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျားသာ ရည်ညွန်းထားသလိုဖြစ်နေပြီး အချက်အလက်များမှာလည်း မရေမရာ ဖြစ်နေသည်ဟု သူက ယူဆသည်။ သံသယရှိဖွယ် Intercept ဟုပင် အက်ဆန်းနစ်ဂ်ျက ထေ့လိုက်သေးသည်။
ရီရဲယ်လတီဝင်းနားသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တက်ဆက်ပြည်နယ်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကင်း ဘီလီမြို့ငယ် HM King အထက်တန်းကျောင်း၌ ဝင်းနားသည် တစ်ကျောင်းလုံး အားထားရသည့် အားကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ တင်းနစ်ကစား သမားဘဝသည် ဒေသခံသတင်းစာများတွင် ရေပန်းစားသော သတင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။
အထက်တန်းအောင်ပြီး နောက်လအနည်းငယ်အကြာတွင် လေတပ်တွင် စတင်အလုပ် ဝင်ခဲ့သည်။ ဝင်းနားသည် အကြီးတမ်း လေယာဉ်အမှုထမ်းအဆင့်ထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး မေရီလန်းရှိ Front Meade တွင် အမေရိကန်တပ်မတော်အတွက် စကားဝှက်များကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။
ဝင်းနားသည် လေတပ်မှချီးမြှင့်သော ဆုတံဆိပ်ကိုရယူနိုင်သည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူမသည် ခေတ်သစ်ပါရှန်းစကား၊ အာဖဂန်နှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံများတွင် သုံးသည့် ပတ်ရ်ှတို အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဘာသာစကားလေးမျိုးခန့် တတ်ကျွမ်းသူတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထို့အတွက်လည်း နောက်ပိုင်းgတွင် အာဖဂန်မှ ကလေးသူငယ်များ ကို လက်ဆောင်များ ပေးပို့ရန် အစဉ် စိတ်အား ထက်သန်သူဖြစ်လာသည် မှာလည်း ယင်းစကားများ တတ်ကျွမ်း ရာမှ အစပြုခဲ့ဟန်တူ၏။
ရီရဲယ်လတီဝင်းနားသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ဒီဇင်ဘာတွင် အမေရိကန်လေတပ်မှ အလုပ်ထွက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ယောဂကျင့်စဉ်များကို စွဲလမ်း ခုံမင်သူ။ လေလွင့်အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန် များကို ကျွေးမွေးခြင်းဖြင့် ပျော်မွေ့သူဖြစ်သည်။ သို့သော် အမေရိကန်လေတပ်တွင် အလုပ်လုပ်စဉ်ကမူ အပယ်ခံသဖွယ် ခံစားရသည်ဟု ယူဆကာ အလုပ်ထွက်ခဲ့သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားတစ်ဦးအဖြစ်လည်း တက်တက်ကြွကြွရှိနေသည့် ဝင်းနားသည် သမ္မတသစ်ထရန့်က အငြင်းပွားဖွယ် Keyston XL ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် Dakota Access ရေနံပိုက်လိုင်းကိစ္စများအပေါ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခွင့်များ အလျင်စလို ချပေးခဲ့သည့် အပေါ်တွင် ဘဝင်မကျ နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရသည်။
ထို့အတွက် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါ ရီ ၉ ရက်က သူမ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ထရန့်ကို ရည်ညွှန်းကာ ''သူက လူလိမ်၊ အကြီးစား လူလိမ်ကြီး'' ဟု ရေးသားသည်အထိ မနှစ်မြို့နိုင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုနေ့သည် ဝင်းနားအနေဖြင့် အမျိုးသား လုံခြုံရေးအေဂျင်စီတွင် ကန်ထရိုက်တာ တစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်မဝင်မီ လေးရက်အလိုတွင်ဖြစ်သည်။
သတင်းပေါက်ကြားမှု သို့မဟုတ် စာနယ်ဇင်းများနှင့်ပတ်သက်သော အမှုအခင်းများ ထွက်ပေါ်တိုင်းတွင်ထောက်ခံသူ၊ ကန့်ကွက်သူဆန့်ကျင်ဘက် မျက်နှာစာနှစ်ရပ်မှာ အစဉ် အမြဲရှိနေတတ်သည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။
အစပိုင်းတွင် မိမိမလိုလားသူ တစ်ဦးသည် ၆၆(ဃ) ဖြင့် အထိန်း သိမ်းခံရလျှင် ဝမ်းသာအားရ ဖြစ်သူ များစွာ ရှိခဲ့သလို၊ မိမိတို့၏ ဘက် တော်သားများ အလားတူ အမှုမျိုးရင် ဆိုင်ရလျှင် ၆၆(ဃ) ကို အမုန်းပိုခြင်း မျိုးများရှိလာတတ်ပြန်သည်။ လူအများစုသည် ထိုအချိန်မျိုး ရောက်လာအချိန်တွင် စကတည်းက အမှားများ၊ ဟာကွက်များနှင့် မူမမှန် ခြင်းများ ပြည့်နေသော ဥပဒေ တစ် ရပ်၏ ရုပ်လုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်သည့်အခါ အမုန်းပိုကြတော့ သည်။
ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်များ၏ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပေါ် ပုဒ်မ ငယ်ကလေးများမှအစ သူလျှို အက် ဥပဒေအဆုံး တားမြစ်ထားသော ပြဌာန်းဥပဒေများနှင့် ငြိစွန်းသည်ဟု အာဏာပိုင်များက အလွယ်သတ်မှတ်ကိုင်တွယ်နေမှုများသည် စာနယ်ဇင်းသမားတို့အတွက် အသည်းနာစရာ ကန့်သတ်ချက်ဟု ယူဆကြမည်မှာ မလွဲပေ။
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့် အဝပေးသည့် နိုင်ငံမှာလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်သည်ပင် တစ်ချိန်ကလောက် မလွတ်လပ်တော့ပေ။ အစိုးရ၏ ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်သတင်း ပေါက်ကြား စေသူများကို တရားစွဲဆိုခြင်းသည် သမ္မတဟောင်းအိုဘားမား လက်ထက်မှ စတင်ကာ အရေးယူမှုများ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အိုဘားမားသမ္မတမဖြစ်မီက ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတိုင်မီက ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော သူလျှို အက်ဥပဒေအရ တရားရင်ဆိုင်သည့် အမှုပေါင်း သုံးမှုသာရှိခဲ့ပြီး အိုဘားမားလက်ထက်တွင် ရှစ်မှုအထိ တိုးပွားလာခဲ့ သည်။
အိမ်ဖြူတော်မှ ပြန်ကြားရေးဝန်ရှောင်စပိုက်ဆာကလည်း နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်များ ကို ဖွင့်ဟ ခြင်းသည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်သူအဖြစ် အရေးတကြီး မှတ်ချက်ပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝင်းနားကိုရည်ညွှန်းကာ ပြောဆိုလိုက်၏။
ရီရယ်လတီ ဝင်းနားဘက်မှ လျှောက်လွှဲချက်ပေးမည့် ရှေ့နေတစ်တက်စ်နစ်ကိုးစ်က လူအများအနေဖြင့် ဝင်းနား၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများပေါ်မှ ထရန့်ဆန့်ကျင်ရေး စကားများ လုံးအပေါ် အာရုံမရောက်စေချင်ဟုဆိုသည်။ ဝင်းနားအကြောင်း သိချင်လျှင် သူမ၏မိဘများ ပြောသည့် အချက်များကိုသာ လက်ခံ နားထောင်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
နစ်ကိုးစ်အနေဖြင့် ထိုသို့ပြောရခြင်းမှာ အမှုရင်ဆိုင်ချိန်တွင် ဝင်းနား၏ Twitter ပေါ်မှ စာသားများက သူ့ကို နှစ်ရှည်ထောင်နန်းစံရန် တစ်ဖက်လှည့်တွန်းပို့သလို ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်။ ဝင်းနားနှင့် The Intercept အကြားတွင် သက်သေပြနိုင်လောက်သော ပတ် သတ်မှုမျိုးလည်းမရှိဟု သူကဆိုသည်။
ဇွန်လ ၈ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွင်လည်း သူ၏ အမှုသည်တွင်အပြစ် မရှိကြောင်း သက်သေပြကာ လိုအပ်လျှင် အယူ ဆက်ဝင်မည်ဟု နစ်ကိုးစ်က ဆိုသည်။
လပိုင်းသာကြာမြင့်သေးသည့် ထရန့်၏သက်တမ်းတွင် ဗဟိုအစိုးရ၏ လျှို့ဝှက်သတင်းများ သည် ထိန်းမနိုင်လောက်အောင် ပေါက်ကြားမှုများဖြစ်ခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်တွင် သာမန် ရုရှားအရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံသည်မှအစ ဗုံးခွင်းစနစ်အတွက်ကျင်းပသည့် တံခါးပိတ်အစည်းအ ဝေးများအထိ သတင်းများ ဆက်တိုက် ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
ယခုတစ်ကြိမ် ရီရဲယ်လတီဝင်း နားအဖမ်းခံရသည့်အချက်ကိုမူ စာနယ်ဇင်းသမားများ အချင်းချင်း စိတ်ကွက်ဖွယ်ရာများ ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မီဒီယာတွင် ဖွင့်ချနိုင်ရန် သတင်းပေးလာသည့်သူ၏ ဇာစ်မြစ်ကို ကာကွယ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်းက နောင်တစ်ချိန်တွင် လူအများ၏ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့သွားစေရန် ကျူးလွန်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အများကဆိုကြသည်။ The Intercept ကမူ သတင်းအရင်းအမြစ်မှလာသော သူ၏အမည်ကို သိရှိခြင်းမရှိဟု ဆို၏။ သူတို့ထံရောက်လာသော စာအိတ်တွင် ဘာမှရေးမထားဟု အခိုင်အမာဆို၏။ သို့သော်လည်း ရလာသည့် အထောက်အထားကို အသုံးပြုကာ ပြန်လည်ဖော်ပြချိန်တွင် စာနယ်ဇင်းသမားတို့ စောင့်ထိန်းအပ်သော အ ခြေခံကျင့်ဝတ်အချို့ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ခြင်းက ဝင်းနားကို အ ဖမ်းခံရရန် တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ် သည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
The Intercept မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဘက်စီရိဒ်က ယခုထက်ပို၍ မှတ်ချက်ပေးရန်မရှိတော့ဟု ဆိုသည်။ သူတို့သည် စုံစမ်းဆေးမှုမှထွက်လာသည့်အရာများကိုသာ တိုက်ရိုက်ကိုးကား ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ The New York Time ကဲ့သို့သော အခြားသတင်း အဖွဲ့အစည်း အချို့ကမူ အတိမ်းအစောင်း မခံနိုင်သည့်သတင်းအစအနများ၊ အထောက်အထားများရလာလျှင် လုံခြုံအောင် ကာကွယ်ပေးထား တတ်ကြသည်။
သို့သော်လည်း မည်မျှအထိ ကာကွယ်ပေးရန်လိုသည်မှာမူ သတင်းရောက်လာသည့် အနေအထားပေါ် တွင် အပြည့်အဝ မူတည်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
Pro Publica မှ အယ်ဒီတာချုပ် စတီဖန်အန်ဂယ်ဘာ့ခ်က သတင်းလောကအနေဖြင့် ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် ပတ်သတ်လျှင် အစဉ်နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်နေလေ့ရှိကြောင်း၊ သို့သော်လည်း စာတစ်လုံးမှမပါသည့် အညိုရောင် စာအိတ်တစ်လုံးအတွက် ယင်းနှင့် သက်ဆိုင် သူကို တာဝန်တစ်ရပ်ကြီးဟု သဘောပိုက်ကာ ကာကွယ်ပေးရန် မဖြစ်နိုင်ပါဟု ဖြေရှင်းချက် ပေးထားသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဝင်းနားကို ဖမ်းဆီးရာတွင် FBI ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များသည် The Intercept မှ ပုံနှိပ်ဖော်ပြချက်များအပေါ်တွင် များစွာကိုးကားထားခဲ့သည်။ အခန့်မသင့်လျှင် အမှုအတွက် ဝင်းနားသည် ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်အထိ ကျသွားနိုင်သည်။
ရှေ့နေ မာ့ခ်ဇိုက်က ဝင်းနားသည် အချက်ပေးခရာမှုတ် သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဟု နှိမ့်ချကာ သုံးသပ်ထားသည်။ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်နှင့် သက်ဆိုင်သောအမှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးလေ့ရှိသူ မာ့ခ်ဇိုက်က နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သတ်သော မရိုးဖြောင့်သည်လုပ်ရပ်များအပေါ် လူအများ စိတ်ဝင်စားလာစေရန် လုပ်ဆောင် ခြင်းမျိုးသက်သက်သာဖြစ်သည်ဟု သူကယူဆသည်။ ထိုမျှမက ဝင်းနားသည် အိုဘားမား လက်ထက်ကတည်းကပင် တရားခွင်ကို ရောက်သင့်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုဖမ်းဆီးခြင်းများသည်လည်း အချက်ပေးခရာမှုတ်သူများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခြေမှုန်းခြင်းလည်း မဟုတ်သေးဟု ထပ် လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားလုံခြုံရေးစီမံကိန်းမှ ဥပဒေအကျိုးဆောင် ပတ်ထရစ်ထူးမီ ၏အမြင်ကမူ ဇိုက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပင်။ သူ့၏ သဘောအရ စာနယ်ဇင်းများထံသို့ သတင်းများပေါက်ကြားခြင်းသည် ဆယ်စုနှစ် များစွာကတည်းက နေ့စဉ်ဖြစ်နေသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။
ဒီမိုကရေစီရထားသော နိုင်ငံတစ်ခုမှပြည်သူများအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်သည့်အချက်မှာ သတင်း အရင်းအမြစ်များပင်ဖြစ်သည့်အတွက် ဝင်းနားကို အပြစ်ပေးအရေးယူခဲ့လျှင် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို အကြမ်းနည်းဖြင့် စတင်ဖြို ဝင်းနားနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများတွင် သူမကိုထောက်ခံသည့်အဖွဲ့များ ပေါ်ထွက်လာသည်အထိ အားပေးသူများ ရှိသလို၊ ပြစ်တင်ရှုတ်ချသူများလည်း ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဝင်းနား၏ Facebook စာမျက်နှာများတွင် သူမကိုမနှစ်သက်သူများ၏ အမနာပ များနှင့် ပြည့်နှက်လာခဲ့သည်။''ထောင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်'' ဟူသော စာသားမျိုးက လည်း ဝင်းနားကို အလွတ်မပေးခဲ့ ပေ။
အချို့ကမူ စနိုးဒန်နှင့် ရီရဲယ်လတီဝင်းနား နှစ်ဦးစလုံးကို တိုင်းပြည်သစ္စာဖောက်များ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်အထိရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော် စနိုးဒန်မှာ အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးနောက် ထွက်ပြေးသည့် သူရဲဘောကြောင် သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဝင်းနားမှာမူ လုပ်ရဲလျှင်ခံရဲသည့် သတ္တိမျိုး ရှိသူဟု ချီးကျူးသူလည်း ရှိသည်။
ထူးခြားဖြစ်စဉ် တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း အတောမသတ်နိုင်သော မေးခွန်းများစွာက နေရာတိုင်းမှ အလျှိုလျှိုထွက်လာတတ်သည်မှာ လူလောကဓမ္မတာပင်။ ယခုဖြစ်ရပ်တွင် ဝင်းနားအဖို့ အပြစ်ရှိသည်ဟု ယူဆလျှင်ပင် သိချင်စရာကောင်း သည့် မေးခွန်းများစွာက ရှိနေပြန်သည်။
ပထမဆုံးမေးခွန်းမှာ အမေရိကန်ပြည်သူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရုရှား၏ ခြယ်လှယ်မှု ကို ခံခဲ့ရသည်ဆိုလျှင် အဖြစ်မှန်အား သိခွင့် မရှိဘူးလားဆိုသည့် မေးခွန်း ဖြစ်သည်။ တစ်ဆက်တည်း ယင်းသို့သောဖြစ်ရပ်ကို ဖွင့်ချခြင်းသည်လည်း ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါသလောဟု ဆက်မေး ချင်လိမ့်မည်။
တစ်ဖန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အေဂျင်စီတစ်ခုလုံးရှိနေပြီး အလွန်အရေးကြီးသည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် တိုင်းတပါးမှ ဟက်ကာတို့၏ရန်ကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဖူးလား ဟု မေးလျှင်လည်း လွန်အံ့မထင်။
အထူးသဖြင့် ဝင်းနားသည် ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်များ ပေါက်ကြားမှုကြောင့် အပြစ်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ လျှင် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဖြင့်တက်လာသည်ဆိုသော လက်ရှိသမ္မတ၏ နေရာသည် ထိုက်တန်ပါ ၏လောဟု မေးရမလို ဖြစ်လာနိုင်ကောင်း၏။
လွန်ခဲ့သော ၂ဝ၁၃ခုနှစ်က စနိုးဒန်၏ ဖွင့်ထုတ်မှုကြောင့် အင်အက်စ်အေသည် ၂ဝဝ၅ခုနှစ်က တည်းက အပြစ်မဲ့ပြည်သူတို့ထံမှ မြောက်များလှစွာသော အချက်အလက်များ တရားမဝင် စုဆောင်းမှုများ ဗူးပေါ်သလိုပေါ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် အမေရိကန်၏အခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည့်တိုင်နောက်ဆုံးတွင် ဖော်ထုတ်သူစနိုးဒန်အပေါ်တွင်သာ အပြစ်ပုံကျသွားရသည်။
ယခုလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ပရန်ကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဟု ဆိုနိုင်ကောင်းသော်လည်း ဝင်းနားသာလျှင် တစ်ဘက်သတ် တရားခံ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အကယ်၍ အက်ဘီအိုင်မှစွပ်စွဲသလို ဝင်းနားသည် ဗဟိုအစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သည်ဟု ဆုံး ဖြတ်ချက်လည်း ကျလာပါက ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများနှင့် ငြိစွန်းပြီး ထောင်ကျ သွားနိုင်သည်။ သို့သော် ဝင်းနား အနေဖြင့် အချက်အလက်များ ဖွင့်ထုတ်ရာတွင် ရောင်းစားခြင်း၊ နိုင်ငံရေး အကျိုးအမြတ်ရရန်ကြံရွယ်ခြင်းများ အလျှင်းမရှိဘဲ ပြည်သူကိုကာကွယ် ရန် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း၏အားနည်းချက်၊ ဟာကွက်များကို လူသိအောင် လုပ်ခြင်းမျှ သာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် သတင်းပေးသူ အဖမ်းခံရလျှင် The Intercept အနေဖြင့် အပြစ်လွတ်သလောဟု မေးချင်စရာရှိပြန်သည်။ သို့သော် အမေရိကန်တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြသူသည် အပြစ်လွတ်သည်ဟုသာဖြေရမည်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပန်တဂွန်စာတမ်းများအမှုတွင် ဗဟိုတရားရုံးက မီဒီယာသည် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုရှိသည့်ကိစ္စများအပေါ်တွင် လွတ်လပ်စွာပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့်ရှိသည်ဟု ရှင်းရှင်း လင်းလင်းဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သည်။
မီဒီယာသည် မိမိကိုသတင်းလာပေးသူအား စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်အရ အကာအကွယ် မပေးသင့်ဘူးလားဟု The Intercept ကို မေးချင်မိသည်။
စနိုးဒန်ကဝင်းနားအဖြစ်သည် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဝီကီလိခ်မှ အက်ဆန်းနစ်ဂ်ျကမူ ''အခု(သတင်းပေး)သတင်းထောက်တွေက ဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ပါစေ၊ သူတို့ဟာ အန္တရာယ်ကောင်တွေတင်မကဘူး။ သတင်း အရင်းအမြစ်၊ စာ နယ်ဇင်းသမားတွေနဲ့ နောက်ဆုံး လူထုကြားကယုံကြည်မှုကိုပါ ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်တဲ့ သူတွေပဲ။ ဒီမိုကရေစီဟာ အမှောင်ထုထဲမှာ ကျဆုံး သွားပြီ'' ဟု ညဉ်းတွားလိုက်တော့သည်။
Reality Winner, Alleged NSA Leaker, Will Plead Not uilty, Lawter Says.
Suspected Leaker’s Facebook page filled with vitriol against Trump.
After Reality Winner’s Arrest, Media Asks: Did ‘Intercept’ ExposeaSource.